Aqoonyahan Hindi Mareykan ah ayaa ka codsaday Mareykanka in loo diro AstraZeneca Jabs Hindiya - Wardeeq 24 TV Aqoonyahan Hindi Mareykan ah ayaa ka codsaday Mareykanka in loo diro AstraZeneca Jabs Hindiya Wardeeq 24 TV
Home Caafimaad-ka Aqoonyahan Hindi Mareykan ah ayaa ka codsaday Mareykanka in loo diro AstraZeneca...
Aqoonyahan Hindi Mareykan ah ayaa ka codsaday Mareykanka in loo diro AstraZeneca Jabs Hindiya
Tirada infakshanka maalinlaha ah ee waddanka ayaa gaadhay meeshii ugu sarraysay, iyada oo in ka badan laba lakh COVID-19 xaaladood la duubay maalin kasta ilaa 15-kii Abriil. Mawjadii ugu horreysay, marka la barbardhigo, waxay aragtay ugu badnaan 97,400 infekshan oo la diiwaan geliyey 24-saacadood.
Iyadoo ay sii burbureyso kaabayaasha daryeelka caafimaad, dhowr gobol iyo isbitaalo ayaa soo sheegaya gabaabsiinta oksijiinta caafimaadka, sariiraha isbitaalada, hawo-mareenada iyo daawooyinka COVID-19, gobolada qaar waxay u arkaan dhibaato ka taagan qolka meydadkooda. Hindiya waxay soo bandhigtay siyaasad cusub oo tallaalka ah Isniinta, 19-ka Abriil, taas oo ballaarin doonta hawlgalkeeda tallaalka ee socda oo ka sarreeya dhammaan da’da 18 jir laga bilaabo 1da Maajo.
Xaruntu waxay ku dhawaaqday inay si dhakhso leh ula socoto ansixinta talaalka dibedda laga soo saaray ee COVID-19 usbuucii la soo dhaafay, si loo ballaariyo tallaalka dalka.
Hindiya waxay horey u siisay oggolaansho deg deg ah seddex tallaal: tallaalka Oxford / Astrazeneca ee Covishield, oo ay soo saartay Machadka Serum ee Hindiya, asal ahaan waxaa soo saaray Covaxin oo ay soo saartay shirkadda Bharat Biotech, uguna dambaysay, Ruushka Sputnik V.
In kasta oo gobollo badan ay soo dhoweeyeen siyaasadda cusub, dhowr kale ayaa sidoo kale muujiyay walaac la xiriira tallaal yaraan iyo kordhinta culeyska mas’uuliyadda gobollada.
Previous articleSida looga takhaluso dufanka uurku jirta: Cabitaannada sonkorta leh waxay kordhiyaan xaddiga dufanka caloosha ee aad sidato
Next articleKhubarada deegaanka ayaa sheegaya in soo jeedinta cimilada ee AMLO ay dib ugu celinayso